Home အက်ဆေးများ ဖျားနာနေတဲ့ မုတ်သုန်မြို့
Menu	HomeGuestbookToday in HistoryNews & Blog FeedsContact Us	သံလွင်အိပ်မက် [Latest]	မျက်နှာဖုံးနှင့် အမှာစာမာတိကာစာဖတ်သူတို့ပေးစာများကဗျာများကာတွန်းများဟာသဆောင်းပါးများအက်ဆေးများဝတ္ထုတိုများပေးစာအင်တာဗျူးစာအုပ်စင်သို့ ကိုသံလွင်ဗေဒင်	သံလွင်အိပ်မက်အဟောင်းများ	အတွဲ(၄) အမှတ်(၁)အတွဲ(၃) အမှတ်(၄)အတွဲ(၃) အမှတ်(၃) (အထူးထုတ်)အတွဲ(၃) အမှတ်(၂)အတွဲ(၃) အမှတ်(၁)အတွဲ(၂) အမှတ်(၃)အတွဲ(၂) အမှတ်(၂)အတွဲ(၂) အမှတ်(၁)အတွဲ(၁) အမှတ်(၁၁)အတွဲ(၁) အမှတ်(၁၀)အတွဲ(၁) အမှတ်(၉)အတွဲ(၁) အမှတ်(၈)အတွဲ(၁) အမှတ်(၇)အတွဲ(၁) အမှတ်(၆)အတွဲ(၁) အမှတ်(၅)အတွဲ(၁) အမှတ်(၄)အတွဲ(၁) အမှတ်(၃)အတွဲ(၁) အမှတ်(၂)အတွဲ(၁) အမှတ်(၁)	ယနေ့31မနေ့က1451တစ်ပတ်အတွင်း1482ယခင်သတင်းပတ်က11734တစ်လအတွင်3း3000ယခင်လက72912စုစုပေါင်း2883407Visitors Counter	Join us in Facebook Facebook Fanbox 1.5.x.0	ဖျားနာနေတဲ့ မုတ်သုန်မြို့	Views : 3232 Favoured : 87
မိုးလှိုင်ည	Users' Comments Average user rating
Display 15 of 15 comments	1. 26-05-2010 23:22
Harlot တစ်ယောက်ရဲ့ဘဝပျက်ခြင်
မောင်ယိုးကဲ	2. 06-04-2010 19:06
ပါ.. ဥပဒေကို လက်တစ်လုံး
mee chit	3. 01-10-2009 22:24
power	4. 22-09-2009 03:03
့လား.... ရာသီတွေ က မပြောင်းဖူ
း.. လူတွေက ပြောင်းလဲခ
ဲ့ကြတာပါ.. ဒါပေမယ့်... အချိန်တစ်ခ
John	5. 14-09-2009 18:21
ကြီးနဲ့ ရတနာတွေ ရှိရာဆီ သွားမယ်လို
့ အရူးတွေ ဆော်သြပြီး နောက်ဖေးပေ
ါက်က ပြန်တက်၊ သူများ ညစာတွေ ခိုးခိုးစာ
းတတ်တဲ့ အရူးတွေ ရှိနေတတ်တဲ
chocothazin	6. 12-09-2009 16:31
lynlyn	7. 11-09-2009 13:28
opppp very very good	Guest
lovely	8. 29-08-2009 02:49
သိုး	9. 16-08-2009 06:12
Ninmujar	10. 31-07-2009 00:32
zm	11. 28-07-2009 20:18
ာ်တောင် အဆုံးထိ မဖတ်ပဲမနေန
တေလေ	12. 27-07-2009 18:53
တယ် မိုးလှိုင် ...	Guest
ဖုန်းမြင့်	13. 27-07-2009 13:17
့ သိထားပေမဲ့ ကိုမိုးလှိ
ို ဖတ်ပြီးမှ ပိုခံစားသွ
ချိုဧပရယ်လ်	14. 26-07-2009 16:59
ို့... အခုတော့ နောက်ဆုံးေ
ဆုဝေ	15. 26-07-2009 06:52
Faint CT ? Guest
Hmoo	Display 15 of 15 comments
Add your commentmXcomment 1.0.8 © 2007-2013 - visualclinic.frLicense Creative Commons - Some rights reserved	ဖျားနာနေတဲ့ မုတ်သုန်မြို့	Saturday, 25 July 2009 19:05	Currently 3.83/5 12345 Rating 3.8/5 (18 votes) < Prev